Dastabej » पुर्जाको जग्गा बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जमा
पुर्जाको जग्गा बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जमा – Dastabej
पुर्जाको जग्गा बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जमा
कटानका कारण सयौं किसान जग्गाबिहिन बन्दै आएका छन् । गेरुवा नदीको कटान पश्चिम तर्फ तिब्र छ ।
नेपालगन्ज—कर्णालीको पश्चिम भँगालो गेरुवानदीले कटान गर्दै पश्चिम तर्फ धार परिवर्तन गर्दै गएपछि गेरुवा गाउँपालिकाका किसानहरुको जग्गा बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जभित्र गाभिदै गएको छ । निकुन्जको सीमा कर्णाली नदीको पश्चिम किनार लेखिएका कारण नदीले कटान गर्दै गएको जग्गा गाभिदै गएको हो । निकुन्ज प्रशासनले कटान गरिएको नम्बरी जग्गामा पनि तारबार गरेको स्थानीयको गुनासो छ । गेरुवा गाउँपालिकालाई पश्चिम तर्फबाट गेरुवा र पुर्बतर्फबाट कर्णाली नदीको भँगालोले घेरेको छ । कटानका कारण सयौं किसान जग्गाबिहिन बन्दै आएका छन् । गेरुवा नदीको कटान पश्चिम तर्फ तिब्र छ । ‘नदीले लालपुर्जाको जग्गा पश्चिम तर्फ कटान गर्दै आएको छ । कटान गरेको बगरलाई निकुन्जले आफ्नो भन्दै तारबार गर्दै आएको छ,’ गेरुवा नदीको जग्गा कटानमा परेका स्थानीय कमल रेग्मी भन्छन्,‘सयौं किसानका लालपुर्जाको जग्गा निकुन्जले आफ्नो भन्दै आफूतिर गाभेको छ ।’ निकुन्ज प्रशासनले भने गेरुवा नदी पश्चिम किनार सीमा लेखिएका कारण त्यही अनुसार जग्गा लिएको जनाएको छ । नदी कटान गरेको जग्गाको बगरमा खर उम्रिएको छ ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जका अनुसार कतिपय स्थानमा निकुन्जको जग्गा बाहिर रहेकाले गाभिएको हो । कतिपय स्थानमा भने किसानको जग्गा पनि परेको हुनसक्ने उसको अनुमान छ । निकुन्जको सीमा गेरुवा नदीको पश्चिम किनार लेखिएको छ । त्यही अनुसार सीमा मानिएको हो ।
गेरुवा गाउपालिकाका प्रमुख जुमानसिंह केसीले स्थानीय किसानका पाँच सय विगहा बढी जग्गा निकुन्जमा गाभिएको बताउ“छन् । स्थानीयको पुर्जाको जग्गा निकुन्जमा गाभिदा अन्याय भएको उनको तर्क छ । ‘गेरुवा नदी किनारमा किसानको जग्गा छ । ठाकुरबाबा नगरपालिका सीमादेखि भारतसम्मको खेति जग्गा नदीसंग जोडिएको छ,’ उनले भने,‘जनताको नम्बरी जग्गा फिर्ता गराउनका लागि पहल भइरहेको छ । तर यो स्थानीयस्तरबाट समाधान नहुने भएकाले समस्या भएको छ ।’
गेरुवा नदीले कटान गर्दै गएपछि तटीय क्षेत्रका गाउँहरु पश्चिम तर्फ सर्दै आएको छ । निकुन्जले भने हरेक वर्षजस्तो बिद्युतीय तारबार गर्र्दै आएको छ । निकुन्जको संरक्षणका लागि तारबार गरिने भएको हो । तटीय क्षेत्रको घर अगाडि बिद्युतीय धराप देख्न सकिन्छ । ‘त्यो परासम्म नम्बरी जग्गा हो । तर पीलर यहा“सम्म लगाइएको छ,’ स्थानीय किसान रामदुलारे चौधरी भन्छन्,‘निकुन्जले पश्चिमबाट च्याप्दै आएको छ । हामी सर्दै आइरहेका छाँै ।’ स्थानीयका अनुसार करिव दुई सय बढी किसानका जग्गा नदीले कटान गरेको र निकुन्जमा गाभिएको छ ।
२२ मंसिर २०७७, सोमबार १५:१५ प्रकाशित
कोरोनाबाट ११ को मृत्यु, ७०८ सङ्क्रमित, ९३२ सङ्क्रमण मुक्त
प्रदेश नं १ प्रदेशसभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव पेश
निर्मला-नन्कुन्नी प्रकरणः अनुसन्धानको गाइडलाइन तयार पार्दै
अल्पसंख्यक माथी हिंसा, मानव जातीको लागि दुखद
१.	मृत भेटिएकी छात्राको मोबाईलमा प्रिन्सपलको एसएमएस, बिद्यालयमा ढुंगामुढा, प्रिन्सपल पक्राउ
२.	न्याय खोज्दै नेपालगन्जबाट २० दिन हिँडेर काठमाडौं पुगे बाँकेका महिला
३.	दिप ज्योतीका प्रिन्सपल पाण्डेबिरुद्ध आत्मा हत्या दुरुत्साहन मुद्दा दर्ता
४.	छात्रा ऐलिसा मृत्यु प्रकरणः प्रिन्सपललाई कारवाहीको माग गर्दै बिद्यालय घेराउ (भिडियो)
५.	नेपाल भारत प्रमुख नाका खोल्ने सरकारी निर्णयः तर खुलेन नेपालगन्ज नाका
६.	बाघको आक्रमणले आँखा गुमाएका बर्दियाका भदैलाई हलिउड अभिनेता लियोनाद्रो डिक्याप्रियोको चस्मा
७.	२० दिन हिडेर काठमाडौं पुगेकी रुबीलाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन प्रहरीलाई सर्वोच्चको आदेश